Apartment trano 1 1/2 drafitra, Area about 70 Ny INSEE dia, 2 efitra sy ny lakozia sy ny efitrano fitahirizana avelany. Property no misy ny 15 km west ny Liden sy ny 55 km west ny Sundsvall. Ny tetika no misy ao amin'ny faritra izay ahatazanana östsluttning Holmsjön. Ny trano dia oandvänd nandritra ny taona maro, ary tsy manan-jiro, rano sy sewers. miray tetika habe 7 511 Ny INSEE dia.
Akution ary maneho
Trano sy tany hamidy amin'ny lavanty 3 May ny Bultgatan 14, Sundsvall.
Display Wednesday 25 Aprily amin'ny 12.00, aorian'ny fampahafantarana t 010-5760726 ny andro mialoha ny fitetezam-paritra.
Sari-tany lehibe kokoa eto.
Ny fananana tsy misy herinaratra, rano sy ny fanadiovana. Fanafanana ihany ny kitay izany. Ny toe na ny fanaka hazo, ivelany misetra ny hazo tontonana, Raha tsorina dia nitendry mandady toerana ny simenitra / vato, ny tafo dia nilahatra ny taratasy. Ny trano lehibe dia manana mila fanavaozana any- ivelany, fivoahan-tsetroka ao mahantra toe-javatra, varavarankely maro no tapaka.
Areal 7 511 Ny INSEE dia, faritra ahitana ny ahitra, ary tsy ampy taona anjara ala. Ny tetika no misy eo amin'ny östsluttning toerana avo sy ny fomba fihevitry ny faritra Holmsjön.
fananana Advertisement – kronofogden.se/3133.html.
Customer Services fampiharana ny lalàna
Inona no atao hoe maintsy atao lavanty?
Ny entana hamidy amin'ny lavanty ampahibemaso no foreclosed satria ny tompony manana trosa tsy voaloa. Ny zavatra nivarotra ny bailiff.
Snöfall ger risk för snöhalka och snör&... hamaky bebe kokoa